စစ်ဒဏ်ခံရသူများ လူ့အခွင့်အရေး ဘယ်သူမှ အရေးတယူ မလုပ် | ဧရာဝတီ
နန်းသီရိလွင်| February 16, 2013 | Hits:24,147
| | ကချင်ပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူများ မန္တလေးသို့ေ ရာက်ရှိလာစဉ် ကြိုဆိုကြသည့် ကချင်တိုင်းရင်းသားများ (ဓာတ်ပုံ – တေဇလှိုင် / ဧရာဝတီ)
“စစ် စဖြစ်ကတည်းက ဒေသခံ ပြည်သူလူထုက စစ်တပ်ရော၊ ကေအိုင်အိုရော ၂ ဘက်စလုံးရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု တွေကို ခံခဲ့ရတယ်။ တပ်သားသစ် အစုဆောင်းခံရတာ၊ ရွာကို မီးတိုက်သွားတာတွေကို ကျနော်တို့ ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ လူ့အခွင့် အရေး ကော်မရှင်ကို တောက်လျှောက် တိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်ထိ ဘာတစ်ခုမှ အရေးယူလာတာ မရှိဘူး” ဟု ဗန်းမော်မြို့ ဒေသခံ တဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာလက မိုးမောက်မြို့နယ် ကျောက်စခန်းကျေးရွာသို့ အစိုးရ တပ်မတော်စစ်ကြောင်း ၀င်ရောက်လာသည့် အတွက် ရွာလူထုက ခေတ္တရှောင်ပေးစဉ် တပ်မတော်သားများက ကျေးရွာသားများ၏ ငွေကြေး၊ ပရိဘောဂ အသုံးအဆောင် များနှင့် မွေးမြူထားသော တိရိစ္ဆာန်များကို ယူငင်သွားပြီး နေအိမ်များကိုလည်း ဖျက်စီးခဲ့သည့် အတွက် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၊ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ လွတ်တော် အမတ်များထံသို့ ပေးပို့ တိုင်ကြားခဲ့ သော်လည်း အရေးယူမှု တစုံတရာ မရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့အတူ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ကလည်း ဗန်းမော်ခရိုင် မန်စီမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံ ၇၀ ခန့်ကို KIA က တပ်သားသစ် စုဆောင်းခဲ့သည့် ကိစ္စကို ရပ်မိရပ်ဖများက တိုင်ကြားစာ ပေးပို့ခဲ့သော်လည်း အရေးယူမှု တစုံတရာ မရရှိဘဲ KIA ၏ ခေါ်ယူ သတိပေးခြင်းသာ ခံခဲ့ရကြောင်း မန်စီဒေသခံ တဦးက ဆိုသည်။
“ပြည်နယ် အစိုးရဘက်က ဘယ်လို ပြောသလဲ ဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ တဘက်အဖွဲ့ အစည်းကို အပြစ်တင်တဲ့ အလုပ်မျိုး မလုပ်ချင်ဘူးလို့ ဆိုတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ သည်းခံနေကြဖို့ နားတောင်ချ လိုက်သေးတယ်။ ဒေသခံ ပြည်သူလူထုက ဘယ်သူ့ကိုမှ အားကိုးလို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ဗန်းမော်မြို့နယ် ကုန်းတိမ်ကျေးရွာ ဒေသခံ တဦးက “ကျနော်တို့ ရွာကို တအိမ်ထောင် ဆန်တတင်းနှုန်း ပေးဖို့ တောင်းထား ပါတယ်။ ရွာက အိမ်ခြေ ၁၀၀ ကျော်ဆိုတော့ ဆန်တင်း ၁၀၀ ကျော်ကို သူတို့ စခန်းကို သွားပို့ရမှာ။ ဒါပေမယ့် အဲလို သွားပို့လို့ အစိုးရ စစ်ကြောင်းနဲ့ တိုးရင် ကျနော်တို့ကို တပ်မတော် က သူပုန်ကို ထောက်ပံ့တဲ့သူဆိုပြီး ဒုက္ခပေးမှာ အသေအချာပဲ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ငွေပေးဖို့ပဲ စဉ်းစားထား ပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့က ကုန်းတိမ်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ၁ အိမ်ထောင် ဆန် ၁ တင်းနှုန်း ကောက်ခံပြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင်ပေးပို့ပေးရန် KIA မလိဘာ တိုက်နယ်မှူးက အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဆန် ၁ တင်းကို ငွေ တသောင်းတထောင် ကျတယ်။ ပေးနိုင်တဲ့သူရှိတယ်။ မပေးနိုင်တဲ့ မတတ်နိုင်တဲ့သူလည်း ရှိတယ်။ မတတ်နိုင်သူ တွေအတွက် တတ်နိုင်သူက ပေးပေးရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ကျနော်တို့မှာ အစိုးရ ၂ ရပ်ရှိပါတယ်။ ကေအိုင်အေ အစိုးရနဲ့ မြန်မာအစိုးရ ကျနော်တို့ကို ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်ပေမဲ့ ကျနော်တို့က အများကြီး လုပ်ပေးနေရပါတယ်” ဟု ကုန်းတိမ် ကျေးရွာ ဒေသခံများက ဆိုသည်။
ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မန်စီ မြို့နယ်တွင်လည်း ၁ နှစ်စာအတွက် တအိမ်ထောင်လျှင် မြန်မာငွေကျပ် သုံးသောင်း KIA ကို အခွန်ဆောင် နေရပြီး သစ်လုပ်ငန်း လုပ်သူ ဒေသခံများကို တနိုင် တပိုင် သစ်သယ်ယူသည့် ဆိုင်ကယ် တစီးလျှင် ငါးထောင်ကျပ် ကောက်ယူနေကြောင်း သိရသည်။
မန်စီဒေသခံ တစ်ဦးက “စစ်တပ်ကလည်း တောင်းတာပဲ။ စစ်တပ်က တအိမ်ထောင် ဘယ်လောက် ဆိုပြီး မတောင်းတာ တခုပဲ။ သစ်လုပ်ငန်း လုပ်တဲ့သူ၊ သစ်သယ်တဲ့ ကားတွေကို ဂိတ်ကြေး၊ ဘာကြေး၊ ညာကြေး ယူနီဖောင်းနဲ့ သေနတ်လွယ်ပြီး တောင်းနေတယ်။ လုံခြုံရေး ကျတော့ ဘယ်ဘက်ကမှ ကောင်းကောင်း လုပ်မပေးနိုင်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
မန်စီဒေသသည် KIA တပ်မဟာ ၁၊ တပ်ရင်း ၁၂ နှင့် တပ်ရင်း ၁၇ တို့ စခန်းချရာ ဒေသဖြစ်ပြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့၌ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် KIA တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် ဗန်းမော်ဒေသ တ၀ိုက်တွင် တိုက်ပွဲများ စဲသွားသော်လည်း ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့က မန်စီမြို့နယ် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးရုံးကို KIA က ၀င်ရောက်ခဲ့သေးကြောင်း သိရသည်။
“ပေးနိုင်တာ မပေးနိုင်တာတော့ မသိဘူး။ မပေး မနေရပဲ။ မနှစ်က တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပြီးပြီးချင်းမှာ ဒီလိုပဲ ၁ အိမ်ထောင် ဆန် ၁ တင်း
တောင်းဖူးတယ်။ ကျနော်တို့က ၁ တင်းတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဆိုပြီး မနည်းတောင်းပန်လို့ ၁ အိမ်ကို ဆန် ၂ ပြည်ပဲ ပေးခဲ့ရတယ်။ ခုတော့ ဘယ်လိုမှ ဈေးဆစ်လို့ မရတော့ဘဲ ပေးရတော့မယ်။ ရွာက အိမ်ခြေနဲ့ဆို ဆယ့်ကိုးသိန်းနဲ့ နှစ်သောင်းလောက် ပေးရမယ်” ဟု ကုန်းတိမ်ကျေးရွာ ဒေသခံ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
KIA နှင့် မြန်မာအစိုးရ တပ်မတော် တိုက်ပွဲများကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသည့် ကျေးရွာစာရင်းသာ ကောက်ယူထားနိုင်ပြီး ဒေသခံ ရှမ်း၊ ကချင်၊ လီဆူး စသည့် တိုင်းရင်းသား တသိန်းခန့်သည် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရပြီး စစ်ဘေးရှောင် စခန်းများတွင် နေထိုင်နေရကြောင်း သိရသည်။
စစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဒေသများရှိ ပြည်သူလူထုသည် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို ခံစားနေရသော်လည်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်၍ အကြောက်တရားကိုပါ ထပ်ဆင့်ခံစားရပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အားနည်းနေကြောင်း ဗန်းမော်မြို့နယ် ရှမ်းအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> theingi tun February 16, 2013 - 1:39 pm	တစ်ပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်တဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးကိုတပ်မတော်ကရောKIAကပါမပေးသင့်ပါဘူး။တိုင်းရင်းသားတွေကိုအများကြီးစာနာဖို့ကောင်းပါတယ်။
Reply	amt February 16, 2013 - 10:12 pm	That’ right !!
Reply	Ja bu February 16, 2013 - 8:33 pm	ဘယ်အချိန်ကျမှ ဆက်ကြေးကောက်တဲ့ကိစ၊ လမ်းပေါ်သေနတ်လွယ်ပြီး ပိုက်ဆံကောက်တဲ့ကိစတွေ ပပျောက်သွားမှာလည်းမသိဘူး။
ကေအိုင်အေတစ်ဖွဲ့ထဲနေရင် သူတို့တစ်ဖွဲ့ထဲကိုဘဲပေးရတယ်ကိစမရှိဘူး။ ဗမာဘက်ကတော့ ဌာနဆိုင်ရာ တွေများတော့ ပေးရတာလည်းများတယ်။
Reply	Swe htwe February 17, 2013 - 12:12 am	This is true. People living in border areas all know about that. How shameful and terrible !!!
Reply	soe yuu nge February 17, 2013 - 3:54 am	daw su dont care the refugee .. she just care the crony … she is same side with junta… she likes power too like thein sein Reply	Shwe Yoe February 17, 2013 - 1:33 pm	No one will take action. Believe me. Why? The government sent soldiers there to commit crimes against humanities. So, the victims will bring their ordeals to their graves. However, the criminals will be reborn as pigs in their next lives and will eat poops. Because they cannot escape the consequences of their wrongdoings. Sequence always results consequence.
Reply	kyaw sein February 19, 2013 - 7:55 am	IF no one take action, there is no pure leader for burma country ….. all are just for selves…. Selfish… so painful for Bogyoke Aung san …..
Reply	kyu yoe February 19, 2013 - 7:49 am	hi
I agree with soe yu nge … We feel so hurt cos Amay Su also on the same side with junta … No hope for poor hopeless Burmese people….. IS it our fate .. wake up all burmese people and face the unfairness of burmese government… IF not it will be worse and worse ….
Reply	တခြားဖတ်စရာများ ဗုံးခွဲ တရားခံများ မမိ၍ မူဆယ် ဒေသခံများ လုံခြုံရေး စိုးရိမ်